बुद्ध हस्पिटलमा हामिलाई ठुल–ठुला अप्रेसनमा सफलता मिलेको छ–डा. रमेश बस्नेत – जागरण अनलाइन
बुद्ध हस्पिटलमा हामिलाई ठुल–ठुला अप्रेसनमा सफलता मिलेको छ–डा. रमेश बस्नेत
२०७५ कार्तिक १४, बुधबार १८:२५ मा प्रकाशित
सर्जन डा.रमेश बस्नेत
प्रबन्ध निर्देशक,बुद्ध इन्टरनेशल हस्पिटल, घोराही, दाङ
बुद्ध इन्टरनेशल हस्पिटल सञ्चालनमा आएको धेरै भएको छैन । तर, आजभोली विरामीको चाप निकै देखिन्छ किन होला ?
हामीले दाङ जिल्लामा निजी अस्पतालको क्षेत्रमा बुटवल, नेपालगञ्ज सरहको सेवा दिइरहेकाछौं । यहि सेवा,सुविधा बुटवल,नेपालगञ्जमा पनि गाह्रो छ । हामीले अहिले उच्च गुणस्तरको सेवा दिइरहेका छौं । हामीले सबैभन्दा राम्रो, उच्च गुणस्तरीय सर्जरी सेवा दिइरहेका छौं । यहि कारणले विरामीहरु जिल्ला बाहिर नगएर यहाँ आउनु भएको हो । अर्को कुरा अस्पताल नयाँ भएपनि म सर्जन त पुरानै हो । मैले दाङमा काम गरेको लगभग चार बर्ष हुन थाल्यो । चार बर्षमा थुप्रै अप्रेशन गरियो । एक बर्षमा हजारको दरले पनि चार बर्षको बीचमा करिब ४ हजार अप्रेशन गरियो । यी मध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत अप्रशेननै सफल भएको छ । परिणाम राम्रो आएकाले विरामीहरु जिल्ला बाहिर नगएर आउनु भएको होला । अप्रेसन एउटा सफल भयो भने उसले आफन्तहरुलाई अन्यत्र लैजान चाँहदैन् । फिजिसियन जस्तो हुँदैन । कुनै विरामी एक ठाउँ भएन भने अर्को ठाउँ सजिलै जान सक्छ । तर, यसमा एक पटक अप्रेसन विफल भयो भने विरामीको ज्यानै जान सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सफलतालाई गुड्वीलको रुपमा लिएका छौं । भगवानले पनि साथ दिएर होला अहिलेसम्म मैले गरेका कुनै पनि अप्रेसन असफल भएका छैनन् । यहि कारणले विरामीबाटै प्रचार,प्रसार भएको होला ।
यो हस्पिटलमा कुनकुन विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ?
हामीसँग सर्जरी, रेडियोलोजी,हार्डजोर्नी, स्त्रीरोग, फिजिसियन र एनेस्थेसिया सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा रहेको छ ।
तपाईको हस्पिटलमा सबैभन्दा ठूलो सफलता अप्रेसनलाई मानिन्छ । तपाई दाङ आएपछि जटिल प्रकृतिका अप्रेसनहरु धेरै भएकाछन् । तपाईले यस अवधिमा जिल्लामै नभएका कस्ता अप्रेसनहरु गर्नुभयो ?
मैले दाङमा सबैभन्दा पहिले दूरविन विधिबाट एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गरे । यसअघि दाङमा चिरेरनै अप्रेसन गरिन्थ्यो । दूरविन विधिबाट कसैले गर्नु भएको थिएन । यो विधिबाट नेपालगञ्ज र बुटवलमा पनि हुँदैन । सिधै काठमाण्डौं जानुपर्छ । अर्को दूरविन विधिबाट अण्डकोषको अप्रेसन पनि गरियो । त्यसैगरी फियोको अप्रेसन गरियो । कलेजोमा किराले घर बनाएकोमा पनि अप्रेसन गरियो । त्यसैगरी लिङ्ग भाँचिएको अप्रेसन गरियो । अनलाइन साइडमा अहिले सबैभन्दा बढी ट्रेन्डिङमा त्यहि समाचार नै छ ।
केही उदाहरणहरु छन् । केही विरामीहरु शरिरको दुखाई महशुस गरेर यहाँका नाम चलेका केही निजी अस्पतालमा जानुहुन्छ । किन हो कुन्नी उहाँहरुले मलाई रिफर नगरेर सिधै नेपालगञ्ज वा वुटवल रिफर गर्नुहुन्छ । नेपालगञ्जका डाक्टरले पनि नसकेर घर जानुस् भनेर फार्काउछन् । त्यस्ता विरामी पनि मेरो सम्पर्कमा आए पछि मैले सफलतापूर्वक अप्रेशन गरेको छु । यसरी नेपालगञ्ज वा वुटवलमा नभएका अप्रेशनहरु धमाधम हुन थालेपछि जटिल प्रकृतिका अप्रेशन गर्न विरामीहरु यहाँ आउने गर्नुभएको छ ।
अप्रेशन गर्ने तपाई आफै विज्ञ तथा अनुभवी डाक्टर हुनुहुन्छ यहाँ उपकरणको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले वुद्ध हस्पिटलमा आवश्यक पर्ने उपकरण किनेको लगभग एक बर्ष भएको छ । यतिवेला सम्मको अवस्था हेर्दा हामीले दाङमै सबैभन्दा एड्भान्स सामान किनेका छौं । हुनत सामानहरु नयाँ बन्दै जान्छन् । तर, हामीले जुन समयमा सामान किन्यौं । त्यतिवेला हामीले सबै भन्दा एड्भान्सनै खरिद गरेका हौं । दूरविन विधिबाट पित्त थैलीको अप्रेशन गर्ने उपकरण हामीले दाङमै सबैभन्दा एड्भान्स किनेका छौं ।हामीसँग भएको इन्डोस्कोपी मेसिन पनि अहिलेसम्मकै एड्भान्स खालको हो । हामीले १०÷१५ दिनमै कोन्सोकोपि मेसिन ल्याउँदै छ । त्यो मेशिनले दूरविन विधिबाट दिसा गर्ने प्वालबाट छिराएर सबै आन्द्राहरु हेर्न मिल्छ । आगामी महिनादेखि बुद्ध हस्पिटलबाट त्यो सेवा पनि शुरु हुन्छ ।
अस्पतालले अन्य कुनै नयाँ सेवा थप गर्ने योजना बनाएको छैन ?
हामीले बाल रोग विशेषज्ञ थप्ने योजना बनाएका छौं । दीर्घकालिन रुपमा आइसीयू सहितको सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । तर, अहिले विविध कारणले त्यो सेवा शुरु गर्न सकेका छैनौं ।
तपाईहरुले अस्पतालमा लगानी थप्ने कुनै योजना छैन ?
दीर्घकालिन रुपमा हामीले ठुलो अस्पताल खोल्न थालेका छौं । घोराहीकै नवलपुरमा हामीले ९ कट्ठा जग्गा खरिद गरिरहेका छौं । त्यहाँ हामी चार÷पाँच तलाको भवन बनाएर त्यसलाई एउटा कर्पोरेट हस्पिटलको रुपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएका छौं । अहिलेको भवनमा पाँच बर्षको सम्झौता हो । एकबर्ष पूरा भइसकेकोछ । अबको चार बर्षभित्र यो हस्पिटललाई नवलपुरबाटै सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो ।
दाङमा तपाईले काम शुरु गरेको चार वर्ष भइसक्यो । यहाँ आउने विरामीको अवस्था हेर्दा दाङको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो पाउनुभयो त ?
अहिले पनि दाङमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना छैन । अहिले पनि विशेषज्ञ सेवा लिने चलन छैन । स्वास्थ्य परिक्षणनै नगरेर मेडिकलबाट जथाभावी औषधि किन्ने चलन छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारिरहेको हुन्छ । औषधी बिक्री गर्ने मान्छेले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न जानेको हुँदैन । त्यसकै भरमा औषधी खरिद गरेर खाँदा हामीले भविष्यमा ठुलो जोखिम निम्त्याइरहेका छौं । कहिलेकाँही त्यहि औषधीले काम गरेपनि कहिले काम गर्दैन । शुरुमा नै गलत औषधी चलाइएको छ भने त्यो विरामीलाई थप समस्या आएका हुन्छन् । जस्तै एपेण्डिस भएको हुन्छ । मेडिकलबाट दुखाई कम गर्ने औषधी लिएर जानु भएको हुन्छ । एक÷दुई दिन निको भएको जस्तो हुन्छ तर, पछि उहाँहरु हामी कहाँ आउनु हुन्छ । त्यतिबेला कि त त्यो फुटिसकेको हुन्छ कि त पिप जमिसकेको हुन्छ ।
यसबाट विरामीको ज्यान जान सक्छ । त्यसैगरी हाड जोर्नीमा पनि समस्या हुन्छ । धेरै मान्छेहरु अहिले पनि हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या आयो भने वैद्य कहाँ जाने चलन छ । त्यहाँ जाँदा केहीले निको भएको अनुभुति गर्नु भएको पाइयो । कहिलेकाँही त्यतिकै पनि विरामीको इमिनिटी पावरका कारण निको भएको हुन्छ । तर, धेरै विग्रिएर आउनु भएको हुन्छ । त्यसले गर्दा हात खुट्टा नै बांगो बनाएर आउनु पर्छ । यहाँ आएर पनि त्यस्ता विरामीको उपचार गर्न निकै कठिन हुन्छ ।
आजभोली धेरै ठाउँमा हल्ला तथा विज्ञापन सुन्नमा आएको छ । अप्रेशन विना नै पायल्सको रोग निको हुन्छ भनेर । सफल भयो भने ४० हजार दिने र सफल भएन भने ४० हजार फिर्ता भन्ने प्रचार मैले पनि सुनेको छु । विरामी त्यहाँ गएर इन्जेक्सन लगाउनु हुन्छ । कहिलेकाँही आफै पनि निको हुन्छ । एक जना विरामीले त्यहाँ गएर फोटो खिचेर मलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो । त्यहाँ सामान्य ५० रुपैयाँको औषधीको इन्जेक्सन लाएको पाइयो । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठगी भइरहेको छ । तर, यस बारेमा यहाँका कुनै पनि सरोकारवाला निकाय बोलेका छैनन् ।
अस्पतालले विपन्न तथा वेवारिसे अवस्थामा रहेका विरामीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत उपचार गर्नु भएको छैन ?
हामीले गरेका छौं । केही विरामीहरु अप्रेसन गर्न आउनु हुन्छ । तर,उहाँहरुसँग पैसको अभाव हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले त सँग पैसा छैन अप्रेसन गर्दैनौं भन्न त भएन नि । हामीले उनीहरुलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति पैसा दिनुस अरु भएको बेला दिनुहोला भन्छौं । कतिले दिनुहुन्छ । कतिले दिनुहुन्न । यस्ता धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् ।
जनउभार साप्ताहीक पत्रिकावाट
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७५ कार्तिक १४, बुधबार १८:२५
सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं २०७५ कार्तिक १४, बुधबार १८:२५
सहकारी समृद्धिको आधार हो २०७५ कार्तिक १४, बुधबार १८:२५